Izizathu Ezi-5 Abathengisi Batshala Imali Eningi Kuzinhlelo Zokuthembeka Kwamakhasimende | Martech Zone
CrowdTwist, isixazululo sokwethembeka kwamakhasimende, futhi Abasunguli Bomkhiqizo kuhlolisiswe abezimakethe zedijithali abangama-234 kumikhiqizo ye-Fortune 500 ukuthola ukuthi ukuxhumana kwabathengi kuhlangana kanjani nezinhlelo zokwethembeka. Bakhiphe le infographic, Indawo Yokwethembeka, ngakho-ke abathengisi bangafunda ukuthi ukwethembeka kuhlangana kanjani necebo lokumaketha lenhlangano lilonke. Uhhafu wazo zonke izinhlobo usuvele unohlelo olwenziwe ngokusemthethweni kanti ama-57% athe azokwengeza isabelomali sawo ngonyaka we-2017
Kungani Abakhangisi Befaka Imali Kakhulu Kuzinhlelo Zokuthembeka Kwamakhasimende?
Ukuzibandakanya kweDrayivu - noma ngabe uyi-B2B noma i-B2C, ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende ayasebenzisana futhi ayaphumelela ukusebenzisa imikhiqizo noma izinsizakalo zakho kuzoqinisekisa ukugcinwa nokwanda kwenani.
Khulisa Ukuthengiselana - Ukugcina phezulu kwengqondo namakhasimende azuzayo kwandisa ama-touchpoints kanye nethuba lokwenza ibhizinisi nabo.
Khulisa Imali - ngoba usuvele wephule umgoqo wokuthembana, amakhasimende akhona azosebenzisa imali eningi nawe… ukubeka uhlelo ukuze luwanikeze umvuzo kubalulekile.
Dala ukuxhumeka - ukuvuza ikhasimende ngokwabelana ngobufakazi babo kuyindlela enhle kakhulu yokumaketha ngezwi ongabeka kuyo imali.
Xhuma / Sebenzisa idatha - ngokuqonda okukhuthaza amakhasimende akho, uyakwazi ukwenza ngezifiso iminikelo owaziyo ukuthi bazoba nentshisekelo kuyo.
Ukutholwa, ukugcinwa, kanye ne-upsell konke kungaba nomthelela omuhle ekusetshenzisweni kohlelo lokuthembeka kwamakhasimende okuqinile. Ama-57% ayo yonke imikhiqizo abheka ukwethembeka kwamakhasimende abo njengokuphumelelayo, ama-88% lapho uhlelo luyi-multichannel! Ngeshwa, yi-17% kuphela yemikhiqizo enohlelo lokuthembeka kwamakhasimende amaningi ngenxa yezithiyo zokuqondanisa, ukuthunyelwa, nokuqoqwa kwedatha.
Tags: abasunguli bomkhiqizoisixukuCustomerukwethembeka kwamakhasimendeukumaketha kokuthembeka kwamakhasimendeukugcinwa kwamakhasimendeimivuzo yamakhasimendeinhlolovo yezokumakethaUcwaningo